मानिसको पुनर्जन्मबारे बारे यस्तो भन्छ विज्ञानले, हामी सबैको मृत्यु पछी के हुन्छ ? - Sudur Khabar
मानिसको पुनर्जन्मबारे बारे यस्तो भन्छ विज्ञानले, हामी सबैको मृत्यु पछी के हुन्छ ?
प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७५, बिहीबार २०:२७
यो अन्त्यहिन प्रश्नको हो । अहिले सम्म यसको निचोड फेला पर्न सकेको छैन । यद्यपी के मानिन्छ भने, मृत्युपछि हामीले पुन जन्म लिन्छौ । धार्मिक शिद्धान्तले यसै भन्छ । तर, अब विज्ञान पनि यसमा सहमत देखिएको छ ।